South Asia and Beyond: भुइँचालो
करीब १२ वर्षअघिको कुरा हो, चंकी श्रेष्ठले एउटा दैनिक पत्रिकामा राशेल कोरीबारे लेखेको एउटा लेखले मलाई लेखक र लेखको पात्र दुवैतिर तान्यो । दुई वषअघि काठमाडौं छिर्दा अभय श्रेष्ठको नामबाट निस्केको कथा संग्रहको 'अ. त. को सत्याग्रहु' शीर्षक कथाले मलाई त्यत्तिकै तान्यो ।
नेपालमा अभय श्रेष्ठले भन्दा राम्रा र लोकप्रिय आख्यान लेख्ने मानिसहरु धेरै छन् । तर आख्यानलाई पनि समाजका उत्पीडित र आवाजविहीनहरुको साहित्य र अन्य गरी दुई भागमा बाँड्ने हो भने पहिलो कित्ताको साहित्य लेखनमा अग्र पंक्तिका केही लेखकहरुमध्ये श्रेष्ठ पनि पर्ने मेरो ठम्याइ छ । विजय मल्लको 'बहुला काजीको सपना' र नारायण ढकालको 'सुनाखरी टोल' संगै अभय श्रेष्ठको 'अ. त. को सत्याग्रहु' र अब 'भुइंचालो' कथाले उत्पीडित वर्गको जीवन उतार्ने साहित्यको रुपमा नेपाली साहित्यमा विशेष स्थान राख्ने मेरो ठम्याइ छ । साथै यो कथाले २०६९ सालभरि गरिमा मासिकमा प्रकाशित गद्यमध्ये उत्कृष्ट ठहरिएर गरिमा गद्य सम्मान पनि पाएको छ ।
गाउँमा सामाजिक परिवर्तनको आवाज कुण्ठा र रिसले बाहेक संगठितरूपले कहिल्यै घन्केन । कामीहरू क्षत्री–बाहुनसामु पर्दा हजुर, विष्ट, बाजे भनेर निहुरी मुन्टी न हुन्थे । पिठिउँपछाडि भने ‘चोर विष्ट’, ‘पातकी काठा’ भन्थे । क्षत्री, बाहुन भने कामीहरूलाई खुसी पर्दा होस् वा रिसाउँदा, हाकाहाकी ‘तँ, चोर डुम’ भनेर सम्बोधन गर्थे ।
उता, भुइँचालाले क्षत्री–बाहुन बस्ती भने कंगाल भएको थियो । पाँच जना केटाकेटीसहित १८ जना मरेका थिए । गाईवस्तु सबै सखाप । भएका अन्न सबै पुरिए । कतिले परिवारै गुमाएका थिए । जसोतसो तिनीहरू भत्केको घरकै इँटा चाङ लगाएर छाप्रो बनाएर बसेका थिए । त्यसलाई हिलोले टाँसेर गारो लगाउनसमेत कसैले भ्याएको थिएन ।
कामीहरूले इँटा थुपारेर छाप्रो उठाउन क्षेत्री–बाहुनलाई सघाए । भुइँचालोअघि पनि उनीहरू लुगा सिउँदा, हातहतियारमा साँध लगाउँदा ज्याला पाउँदैनथे । त्यसबापत तिनीहरू आ–आफ्ना विष्टको घरबाट मंसिरमा तीन पाथी धान, केही चामल र तरकारी पाउँथे । दिनभरि काम गर्दा पुन्कीस्वरूप एक माना चामल र अलिकति आलु, मासको दाल र खुर्सानी पाउँथे । दलितहरू त्यही चामल पनि बेचेर गहुँ वा मकैको पिठो किन्थे । यसो गर्दा पूरै परिवारको एक छाक पेट भरिन्थ्यो । खेतबारीमा काम गरेबापत भने अलिकति ज्याला पनि पाउँथे । अहिले त चाहेर पनि क्षत्री–बाहुनले ज्याला दिन सक्दैनथे ।
हतियार, कुखुरा, सुँगुर, बुँगुर, हाँस कामीहरूका गुजाराका प्रमुख स्रोत थिए । त्यसबाट छाक टार्न उनीहरूलाई सधैँ हम्मे पथ्र्यो ।चामल बेचेर पिठो किन्न नपाएका दिन कामी बस्तीमा पनि भात पाक्थ्यो । त्यसले पूरै परिवारलाई टन्न खान पुग्दैनथ्यो । यसको एउटा फाइदा पनि थियो । भात पकाउँदा माड खान पाइन्थ्यो । एक माना चामल छ भने चार माना चामल पाक्ने भाँडोमा टन्न पानी राखिन्थ्यो । उम्लेपछि त्यसको माड काढिन्थ्यो । बच्चाहरू माडमा नुन घोलेर खुब मीठो मान्दै खान्थे । यसो गर्दा बच्चाहरू झन्डै अघाइसकेका हुन्थे । तिनले भात अत्यन्त कम खान्थे र बाबुआमाले पनि खान पाउँथे । चामल अत्यन्त कम भएका बेला भने पूरै परिवारले माड खाएर गुजारा चलाउँथ्यो । जस्तो कि घरमा एक चौथाइ वा आधा मानामात्र चामल छ भने त्यसमा एक पाथीजति पानी हालिन्थ्यो र खोले बन्नेगरी बेसरी पकाइन्थ्यो । यसबाट बनेको माड अझ मीठो हुन्थ्यो । माडमा अलिकति नुन राख्दा काइदा हुन्थ्यो । त्यसमाथि अलिकति चिनी पाए दूधभन्दा मीठो ।
भुइँचालोपछि क्षत्री–बाहुन बस्तीमा भोकमरी सुरु भयो । खोतलखातल पारेर निकालिएका अन्न पनि सकिएको थियो । धान पाक्न अझै दुई, साँढे दुई महिना बाँकी थियो । बारीका दुधिला मकै काँचै खाएर सकिएका थिए । कति छाक तिनले टाढाका आफन्तकहाँबाट अन्न सापटी ल्याएर छाक टारे । कतिन्जेल चल्थ्यो यसरी ? आखिर भोकमरी सुरु भइहाल्यो । क्षत्री–बाहुनहरू अब लट्टेको साग, कर्कलो, लुँडे, च्याउ, फलफूल, कन्दमूल खाएर छाक टार्न थालेका थिए । विषालु च्याउ खाँदा सोम थापाकोे एकमात्र सन्तान १५ वर्षे हरिहरको मृत्यु भयो । त्यसपछि उनीहरूले छानीछानी रक्तेच्याउ, बुढीच्याउमात्र खान थालेका थिए । परन्तु, च्याउकै कारण बस्तीमा आतंकारी गोपनजस्तै महामारी छिरिरहन्थ्यो ।
विपत्ति र अभावमा सबैभन्दा हेपाहा भोक नै हुँदोरहेछ । विपत्ग्रस्त क्षत्री–बाहुन बस्तीमा भोकले मानौँ हिँडेर, साइकल चढेर वा मोटरसम्म चढेर आउन सर्वथा अस्किारिदिएको थियो । मानौँ त्यो रकेट चढेर आउँथ्यो र त्यसैमा राखेर लैजान खोज्थ्यो । गाविस र जिविसमा ढिलो गरी सूचना पुग्यो तैपनि कुनै राहत आइपुगेन ।
जेठी छोरी कमला भुँडी थिच्दै आएर रुन थाली, ‘आमा ओक (भोक) लाग्यो हन्या ।’
Labels: Avaya Shrestha, Dashain, Fiction, Guest, Nepali